I-NOAA ithola izithombe zokuqala zombani kusuka ku-GOES-16 Satellite | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lesi sithombe sikhombisa imisebe ebanjwe yi-GLM ngehora elilodwa ngoFebhuwari 14, 2017. Isithombe - NOAA
Imishudu yombani ebonwe eMhlabeni iyamangalisa, kepha ... ungacabanga ukuthi uyakwazi ukuyibona usemkhathini? Manje lelo phupho selizogcwaliseka, kuphela ukuthi esikhundleni sokuba semkhunjini womkhathi singakwazi ukujabulela izithombe ngaphandle kokushiya ikhaya sibonga iGeostationary Lightning Mapper (GLM) engena kusethelayithi yeGoES-16 ye-NOAA.
Ngenxa yalezi zithombe, izazi zezulu zizokwazi ukubikezela ngendlela elula kakhulu lapho umbani nombani zizoshaya khona.
I-GLM iyithuluzi elenzelwe ukuthola izikhathi kumjikelezo we-geostationary odlulisa imininingwane, kuze kube manje, ebingakatholakali kososayensi. Umephu ufuna ngokungaphezi noma yimuphi umbane eNtshonalanga Nenkabazwe, ozosiza ukuthola iziphepho.
Uma kunemvula enkulu, idatha etholakalayo izokhombisa ukuthi ngabe balahlekelwa amandla noma, kunalokho, bayaqina. Le mininingwane izohlanganiswa neminye imininingwane etholwe yi-radar nezinye iziphuphutheki, futhi izoba ulwazi oluwusizo kakhulu ukulindela isimo sezulu esibi., kanye nokukhipha izexwayiso nezaziso isikhathi esithe xaxa kusengaphambili.
Le animation ye-GLM ikhombisa umbani ohlotshaniswa nesistimu ekhiqize iziphepho ezinkulu nezinye iziphepho eTexas ngoFebhuwari 14, 2017. Isithombe - NOAA
I-GLM futhi iyakwazi ukuthola umbani efwini, okuvame ukuthatha okungenani imizuzu emihlanu ukufika phansi. Lokho kungabonakala isikhathi eside, kepha kubalulekile ukwazisa bonke labo abenza imisebenzi yangaphandle ngokwakhiwa kwesiphepho futhi ngaleyo ndlela bagweme ukulimala okungaba khona.
Uma ufuna ukwazi kabanzi nge-satellite yeGoES-16, chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » I-NOAA ithola izithombe zombani zokuqala ezivela kusathelayithi i-GOES-16